Nduzi maka ide ederede nke World March
Mbido » Nduzi maka ide ederede nke World March
1 Nduzi akwukwo maka akwukwo ozi, News, Press Releases
1.1 Ụdị ederede
1.2 Okwu maka ederede
1.2.1 Kedu ka esi amata ma ọ bụrụ na mkpụrụ okwu na-achọgharị?
1.3 Aha na aha
1.4 Njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ
1.6 Vidiyo Youtube
1.7 Nkọwa ikpeazụ
Nduzi akwukwo maka akwukwo ozi, News, Press Releases
Ihe ederede ga-enwe usoro kachasị dị irè, ya bụ, nke a ga-abụrịrị dị mfe na ọkwa nke ihe eji emepụta ihe. Ya bụ, anaghị eji ederede dị iche iche. Jiri naanị ederede ederede.
Ihe ziri ezi bụ na ederede naanị ederede:
Obi ike: igosi isi ihe di mkpa
Na-agba ọsọ: nke kachasị mkpa, maka nhọpụta ma ọ bụ okwu n'asụsụ ọzọ.
Ndepụta: ha nwere ike ịgụ ma ọ bụ ọtụtụ. Ndepụta dị mfe, yana isi ma ọ bụ nọmba site n'aka 1.
Iji zere: n'okpuru, ederede ederede, wdg ...
Ọ bụrụ na e dere ederede na Okwu ma ọ bụ na Google Docs, ọ dị mkpa ịmegharịa ya na HTML tupu ị bulite ya na weebụ. Maka nke a, ị ga - eji ngwá ọrụ dịka nke a: https://word2cleanhtml.com. Ọ na-etinye ihe odide niile na Okwu ma ọ bụ Google Docs, ma weghachite ederede na HTML. Mgbe ahụ, ederede HTML ahụ dị na WordPress HTML nchịkọta akụkọ:
Okwu maka ederede
Nke a bụ ike mgbagwoju anya nke ndu ederede ederedeỌ bụ ya mere m ga-eji tụọ aro ka e mee ihe kacha mkpa na ka e mee ya dị ka o kwere mee. Isi okwu bụ ihe dị n'etiti okwu 2 na 5 dị ịrịba ama ma na-emegharị ọtụtụ ugboro n'isiokwu ahụ. Ọmụmaatụ: ọ bụrụ na isiokwu na-ekwu banyere a «agbụ mmadụ na La Coruña" ya mere Ntọala 5 a nwere ike ịbụ onye na-ede akwụkwọ maka isiokwu ahụ. N'ezie, naanị "agbụ mmadụ" nwere ike zuo oke n'ihe atụ a. N'ozuzu, ihe kachasị mma bụ na isiokwu bụ ihe ndị mmadụ na-achọkarị na Google.
Kedu ka esi amata ma ọ bụrụ na mkpụrụ okwu na-achọgharị?
Jiri ngwa okwu Tracker: https://www.wordtracker.com/search (ga-etinye na Territory, Spain) Ọ bụrụhaala na ọ nwere nsonaazụ, ya bụ, nyocha 10, o zuru ezu. Ma ọ bụ were okwu na-adịchaghị mkpa, dịka ọmụmaatụ: "udo". Ọ bụrụ na ị nweghịzi ike iji Wordtracker n'ihi na ị gafere oke ọchụchọ, ị nwekwara ike ịnwale Übersuggest.
Ihe kachasị mma bụ na ọ nwere nsonaazụ, mana nsonaazụ ọjọọ, n'etiti 10 na 500 ga-adị mma. Dịka ọmụmaatụ: "March ụwa" zuru oke, ọ bụghị oke mma n'ihi na ọ nwere naanị 10, mana zuru oke:
N'aka nke ọzọ, "udo", "ịhụnanya", ... dị njọ nke ukwuu n'ihi na ha nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu. dị elu karịa 500:
M maara na mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ike ịchọta okwu nke dabara na njirisi ndị a. Ọ bụrụ na ịchọtaghị otu nke dabara, ọ dịghị ihe na-eme.
Ihe mgbaru ọsọ bụ itinye isiokwu a ma ọ dịkarịa ala 2 ugboro na ederede enweghị ịgụ akụkọ, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ m ga-aza n'okpuru ebe a. Otu n'ime okwu ndị ọzọ nke isiokwu a, ga-enwe obi ike.
Aha na aha
Aha aha (nke na-egosi naanị n'ime igbe dị n'elu) aghaghị inwe n'etiti mkpụrụ edemede 50 na 75. Ị ga-agụnye isiokwu ahụ. Ọ bụ ya mere ọ na-abụkarị ezigbo echiche ịhọrọ isiokwu ahụ, na-achọ aha
Ọ dị mkpa na ederede nwere ọtụtụ utu aha, ma ọ dịkarịa ala otu nchịkwa nchịkwa 2 (2 Mbụ na Okwu). Dị ka o kwesịrị, ị ga-enwe 1 ma ọ bụ ọtụtụ 2 larịị na ndị na-ejikọta 3.
Ọzọkwa A na-atụ aro ya tinye ndepụta okwu na ngalaba dị n'okpuru Isi Isi nke na-ekwu "Tinye ndepụta okwu ebe a".
Ọnụ ọgụgụ nke ndepụta okwu ahụ nwere ike ịbụ ebe sara mbara, ma o nwere ihe odide 121 na 156, n'ihi na ọ ga-eji nkọwa Meta. Ọzọkwa, ga-agụnye isiokwu.
N'ikpeazụ, a ghaghị iburu n'uche na onye njide 3 (H3) ga-enwerịrị H2 n'elu ma ọ ga-enwerịrị opekata mpe 1 na-enye H2 iji nye ndị isi ọrụ ahụ oge niile. H2> H3> H4.
Yabụ, ọ bụrụ na anyị eleba anya n'iwu nke ndị na - ejide ya ma ọ bụrụ na ịmaatụ, anyị nwere iwu atọ ndị a
H2 - H3 - H4 - H2 - H4: Ọ ga-abụ ihe na-ezighi ezi n'ihi na H4 ga-abụrịrị onye na-ebu ụzọ mee ya.
H3 - H2: Ọ ga-abụ ihe na-ezighi ezi, n'ihi na H3 ga-abụrịrị onye ọ bụla ga-ebu ụzọ
H3 - H3 - H3: Ọ ga-abụ ihe ọjọọ n'ihi na a ga-enwerịrị opekata mpe otu H2
H2 - H3 - H4 - H4 - H2 - H3 - H2 - H3. Ọ ga-adị mma n'ihi na a na-akwanyere usoro iwu hierarch ùgwù.
N'ikpeazụ, isiokwu ga-aga, na 1 nke utu aha (ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ọ bụ na 2 ma ọ bụ Mbụ 3).
Njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ
Gbalịa ka ị ghara iji njikọ na-apụ apụ, ma e wezụga 2 kwa ederede oke, ọ bụ ezie na naanị 1 dị mma.
Ọ gwụla ma ọ bụ njikọ na mpụga na peeji nke nwere ọtụtụ aha ** , Ụdị Wikipedia, akwụkwọ akụkọ dị ike ma ọ bụ ihe yiri nke a, tinye njikọ dị ka Ọ BỤGHỊ na nhọrọ:
Ọ dị mkpa na isiokwu ọ bụla na-ejikọta n'akụkụ ụfọdụ na isi ihe nke weebụ. Ọ bụrụ na ọ gaghị eme ebe, ịnwere ike ịbanye mgbe niile na ibe.
Dịka ọmụmaatụ: "N'ikpeazụ March March, anyị nwere ike ịga…”
N'ime njikọ dị n'ime, etinyela NOFOLLOW.
** Ọ bụrụ na ị maghị ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ aha ma ọ bụ na ọ bụghị, tinye https://www.alexa.com/siteinfo ma tinye URL nke ngalaba ahụ, ọmụmaatụ «hoy.es».
Ọ bụrụ na ị bụ n'okpuru 100.000 na Global Rank, mgbe ahụ ịkwesighi itinye NOFOLLOW. Ma ọ bụrụ na ọ bụ n'elu, ee, ị ga-etinye ya.
Tupu ị bulite ihe oyiyi naanị buru n'uche ihe ndị a:
Aha oyiyi ahụ ga-adị mfe, na-enweghị "ñ" (gbanwee ñ na n), na-enweghị ụda olu, ma ọ bụrụ na enwere oghere, gbanwee ha ka ọ bụrụ nkedo.
Mgbe ị na-etinye onyinyo ahụ, ị ​​ghaghị imeju Mpempe akwụkwọ, Alternative Text and Description fields. Ị nwere ike itinye otu n'ime mpaghara atọ ahụ.
Enweghị onyinyo kwesịrị ịfe 1000 px n'ogologo.
Ọzọkwa Ọ dị mkpa iji tinye ihe ngosi. Ọ bụrụ na ịdebe ihe oyiyi na ederede, anaghị eji otu oyiyi ahụ dị ka ihe ngosi. Ọ dị mma na ọ dịghị onyinyo dị na ederede, na ọ dịghị ihe ọhụụ ọ bụla. Na Mbụ, ederede ọzọ na Nkọwa nke Foto ahụ, ọ dị mkpa itinye isiokwu ahụ.
Ụdị kachasị maka Njirimara ahụ bụ 960 x 540 ma ọ bụ akụkụ nke 16: 9. Ogologo ihe oyiyi ahụ ga - adị n'etiti 600px na 1200px n'obosara.
Jiri obere koodu a:
[su_youtube_advanced url = "https://www.youtube.com/watch?v=MDvXQJgODmA" modestbranding = "ee" https = "ee"]
Naanị ịgbanwe URL ahụ, site na otu kwekọrọ.
Dị ka eziokwu na-adọrọ mmasị, isiokwu a na-emezu ihe niile chọrọ maka ederede nke m kwuru na ebe a gụnyere nyocha nke ọchụchọ:
Lee m kwadebere PDF Ndepụta ndepụta na ihe kachasị mkpa iji chefuo ihe ọ bụla.
© 2022 Haziri 4P Marketing